FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PYRENEES TSARA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pyrenees tsara
Tacoma avy amin'ny tsipika fiasa (ankavia) miaraka amin'i Tundra avy amin'ny tsipika fampisehoana (ankavanana) samy miasa amin'ny alika mpiambina andiany.
Alika Mountain Pyrenean
Alika Mountain Pyrenees
Ny Great Pyrenees dia fantatra ihany koa amin'ny alika an-tendrombohitra Pyrenean. Ny halavan'ny alika dia lava kokoa noho ny halavany. Ny loha dia miendrika wedge miaraka amin'ny satro-boninahitra somary boribory ary mitovy amin'ny ambin'ny vatana. Ny lamina averina ambaratonga. Mitovy halava amin'ny karandoha any aoriana ny satroka. Ny karandohany dia malalaka toa ny halavany miaraka amin'ny takolaka fisaka. Tsy misy fijanonana miharihary. Mainty ny orona sy ny molotra. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny maso mavo volontsôkôlà sy salantsalany dia miendrika almond ary milentika. Ny sofina mainty volontany, miendrika V dia entina ambany, fisaka ary manakaiky ny loha, boribory eo amin'ny tendrony, ary manodidina ny haavon'ny masony. Somary mivelatra ny tratra. Ny rambony volom-borona tsara dia mahatratra ny volombava ary azo entina ambany na miakatra any an-damosin'ny kodiarana rehefa faly ny alika. Indraindray misy mpisoloky amin'ny faran'ny rambony. Ny Great Pyrenees dia manana dewclaw tokana amin'ny tongony aloha ary dewclaw avo roa heny amin'ny tongony aoriana. Ny alika dia manana palitao roa tsy mahazaka toetr'andro. Ny akanjo ambany dia matevina, tsara ary volon'ondry, ary ny akanjo ivelany lava, matevina, marokoroko ary fisaka. Misy boribory manodidina ny soroka sy ny tendany izay miharihary kokoa amin'ny alika lahy. Misy volom-borona amin'ny rambony sy manaraka ny vodin-tongotra. Ny palitao dia fotsy fotsy na fotsy misy tifitra volondavenona, volondavenona, volontany mena na mavo mavo.
Ilay Great Pyrenees dia mpiambina mahay sy mahavariana, natokana ho an'ny ankohonany, ary somary mitandrina ny olon-tsy fantatra - olombelona sy canine. Matetika izy io dia ampiasaina hiambenana ny biby fiompy. Rehefa tsy mahatezitra dia milamina, tsara fomba ary somary matotra. Be herim-po, tena tsy mivadika ary mankatò. Malemy fanahy sy be fitiavana amin'ireo olona tiany. Natokana ho an'ny fianakaviana na dia ilaina aza ny fahafoizan-tena. Malemy fanahy be izy miaraka amin'ny fianakaviany sy ny zanany. Mahasoa indrindra amin'ny ankizy izy io rehefa notezaina niaraka tamin'izy ireo hatramin'ny alika kely, ary raha tsy ampiasaina ho mpiambina andian'ondry miasa dia alao antoka fa hifanerasera tsara amin'ny olona, ​​toerana ary tabataba izany. Manana toetra mahaleo tena izy, ary mety manandrana manjaka tompony tsy dia azo antoka na malemy paika , ary / na tompona izay mitondra ny alika toy ny olombelona, lasa maditra na Faritany . Ny tompon-trano dia tokony ho hentitra, nefa milamina , matoky tena ary mifanaraka amin'ny alika. Mametraka lalàna ny alika dia tsy maintsy manaraka ary mifikitra amin'izy ireo. Ny Great Pyrenees dia mpiasa matotra, saingy mahaleo tena. Mahareta rehefa Training ny Great Pyrenees, satria mety ho somary sarotra. Raha avela irery ao an-trano tsy misy ny habetsany ny fanatanjahan-tena sy na ny fitarihana dia mety hanimba . Ny Great Pyrenees dia tsara miaraka biby tsy kaninina , ary matetika tia saka . Ireo alika ireo dia tsy mahatratra ny fahamatorana raha tsy eo amin'ny 2 taona eo ho eo. Ny sasany tsy tsara amin'ny fametahana ary mety mirenireny. Mila tompona mahatakatra sy mampihatra izy ireo dogmanship voajanahary . Ny Great Pyrenees dia mazàna miondrika ary misy ny mirona tohaina.
Haavony: Ny lahy 27 - 32 santimetatra (69 - 81 cm) Ny vehivavy 25 - 29 santimetatra (63 - 74 cm) no avo lenta, fa ny Pyrenees sasany dia lava 40cm (1 metatra)
Milanja: Lehilahy amin'ny 100 kilao (45 kg) Vavy avy amin'ny 38 kilao (38 kg)
Mora volo , dysplasia hip, taolana cancer , patellas mihalalaka. Mety hiteraka olana amin'ny hoditra amin'ny toetr'andro mafana be.
Mila fampihetseham-batana betsaka ny pyrenees mba hijanonana amin'ny endriny. Raha tsy miasa mavitrika amin'ny maha mpiambina andian'ondry azy ireo izy ireo dia mila raisina isan'andro, lava mandeha haingana .
retriever volamena sy ny spaniel Mix
Ny fikosehana tsy tapaka ny palitao lava lava dia hitazonana azy ho salama tsara, saingy ilaina ny fitandremana fanampiny rehefa mandatsaka ny palitaony matevina ilay alika. Ny palitao ivelany dia tsy matotra raha tsy hoe misy burr, foxtail na zavatra ivelany hafa izay miraikitra amin'ny palitao. Mety ho olana amin'ny alika miasa any ivelany io. Ny tompona sasany dia misafidy ny hanaratra ny palitao amin'ny fahavaratra mba hisorohana izany amin'ny fisehoan-javatra, fa mitandrema sunburn . Mandrosoa na shampooing maina raha tsy ilaina. Great Pys nandatsaka ny taona mandavantaona fa ataovy be dia be isan-taona.
Ny Great Pyrenees dia nipoitra tany Azia Afovoany na Siberia. Taranaka avy amin'ny Kuvasz hongariana ary ny Maremma-Abruzzese . Ny Pyrenees koa dia havan'i St. Bernard , mandray anjara amin'ny fampandrosoana azy. Izy io dia manana tantara lava toy ny alika mpiambina. Nankany Eropa ireo alika ary nijanona tany amin'ny faritra be tendrombohitra mandra-pahatongan'ny vanim-potoana antonony ny alika, ary nanjary nalaza tsikelikely tamin'ny andriana frantsay ho alika mpiambina ilay karazany. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-17 dia naniry hanana iray ny manan-kaja frantsay rehetra. Miaraka amina vozon'akanjo maranitra sy palitao matevina i Great Pyrenees miaro ny andian'ondry marefo amin'ireo biby mpiremby toy ny amboadia sy bera. Ny Great Pyrenees dia voaporofo fa karazany be dia be miasa amin'ny alika mpamonjy avalanche, toy ny mpitaingina sarety, alika fitsangatsanganana, toy ny alika mpiambina amin'ny dia ski, mpiambina andiany, alika ady, ary mpiara-miasa fianakaviana sy fananana. Ny AKC dia nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ireo Great Pyrenees tamin'ny 1933.
alika pitbull orona manga mainty sy fotsy
Tacoma (aka Taco) alika alika amin'ny 12 herinandro
Sary natolotry ny Majesta Great Pyrenees
'Tundra (ankavia) avy amin'ny tsipika fampisehoana alika, ary Tacoma (ankavanana) avy amin'ny tsipika fiasana, dia samy miara-miasa amin'ny mpiandry ondry amin'ny toeram-piompiana. Manana palitao matevina matevina i Tundra. Mandritra ny asany dia misambotra ao anaty palitaony ireo burrs sy sticks ary tsy maintsy miasa na hokapaina. Tacoma kosa manana palitao manify. Mbola matevina raha oharina amin'ny ankamaroan'ny karazany, saingy manify kokoa noho ny palitao fampisehoana an'i Tundra. Ny burrs sy ny tapa-kazo dia tsy mora tratran'ny akanjo mora foana. Tundra, avy amin'ny tsipika fampisehoana, dia tsy mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra noho ny Tacoma. Tacoma dia mazàna kokoa hiondrika amin'ireo olon-tsy fantatra, mitazona ny halavirany sy ny boriboriny manodidina ilay olona izy na mijanona tsy mibontsina sy manetsiketsika ny rambony miaraka amin'izay. Tundra (asehoy ny tsipika) dia mbola mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra, na izany aza, mety handehandeha kokoa hisintona noho izy Tacoma izy. Tena tsy fahita firy fa hanatona olon-tsy fantatra ho sakaina i Tacoma. Mihazona ny halavirany izy, mibontsina, fa tsy mampiseho mariky ny herisetra ara-batana. Amin'ny alina i Tacoma dia toa miambina kokoa noho i Tundra Tundra matetika hijanona amin'ny toerana iray mandritra ny alina raha i Tacoma kosa dia handeha hatrany amin'ny sisin-tanin'ilay trano, mibolisatra sy manenjika izay heveriny fa tsy an'ny tena. Hitako nanenjika amboahaolo ilay trano i Tacoma. Afaka namakivaky ny fefy ilay amboahaolo, saingy tsy dia be loatra. Nilamina ny akoho tamin'io alina io! Hikorontana i Tundra amin'ny alina ary hitako nihazakazaka nanenjika biby tsy an'ny tena izy, fa tsy toy ny Tacoma matetika. Ny alika roa dia miaina any ivelany miaraka amina andian'osy, soavaly roa ary mandehandeha tsy mihetsika amin'ny alina manodidina ny tranon'akoho, vorona ginea ary peafowl, izay arovany amin'ny amboahaolo, Raccoon , posum ary skunk. Raha tsy misy ireto mpiandry andiany roa ireto dia azoko antoka fa tsy hanana vorona sisa tavela isika. Namonjy azy ireo imbetsaka izy ireo. '
Great Pyrenees Tundra (aoriana) ary Tacoma (eo aloha) miambina ny andian'osiny
'Izahay dia nividy an'i Osa, vehivavy torotoro fo, tamin'ny faha-2 taonany tamin'ny 2008. Nampiditra azy tsara niaraka tamin'ny ondrivavy telo sy ondrilahy iray izy. Manana ondry telopolo izahay izao, ao anatin'izany ny zanak'ondry 11 teraka hatramin'ny faran'ny volana novambra. Ity sary ity dia mahazatra ny fihetsiny mikasika ny ondrilahy sy ondrilahy iray na roa hafa. Hotazoniny mandritra ny 30 minitra io paositry io, indraindray mikimpy ny masony, matetika misokatra ny masony, ary toa Bodista be ilay izy. Misy vazaha Pyrenees Lehibe hafa mahalala an'io fihetsika io na efa nahita zavatra toa azy? Ity no alika milay indrindra eto an-tany. '
Mandehandeha an-tongotra i Tundra the Great Pyrenees
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ireo Great Pyrenees
Sarin'i Pyrenees mahafinaritra 1
Sary Pyrène tsara 2
Sary Pyrenees tsara 3
Sarin'i Pyrenees mahafinaritra 4
Sary Pyrenees tsara 5
Sary Pyrénées mahafinaritra 6
Sarin'i Pyrenees mahafinaritra 7
Sarin'i Pyrenees tsara 8
Sary Pyrénées mahafinaritra 9
Sary Pyrenees mahafinaritra 10
Sary Pyrenees mahafinaritra 11
yorkie shih tzu mifangaro info
asehoy ahy ny sarin'ny terriers rat
basset hound sy mix bulldog anglisy
antsasaky jack Russell antsasaky chihuahua
olo-masina lehibe Pyrénées Bernard Mix